अल नेपाल लियो मिट २०१८ को तयारी तिब्र पारिएको छ ः चाँन्दबाबु इराकी - २५ माघ २०७४, NepalTimes
अल नेपाल लियो मिट २०१८ को तयारी तिब्र पारिएको छ ः चाँन्दबाबु इराकी
लियो मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट, ३२५ नेपाल वर्ष २०१७÷१८
लायन्स क्लबको लायन्स क्लबको भातृ संस्थाको रुपमा रहेको लियो क्लवको अल नेपाल लियो मिट २०१८ आगामि फागुन ३ र ४ गते मोरंगको कटहरी स्थित गोपाल फनपार्कमा हुदैछ । दुई दिन सम्म हुने उत्त कार्यक्रमका विभिन्न कार्यक्रमहरु हुनेछन् । यसै सेरोफेरोमा नेपाल टाइम्सका समाचार प्रमुख किशोर विश्वकर्माले लियो मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट ३२५, २०१७÷१८ नेपालका प्रेसिडेन्ट चाँन्दबाबु इराकी सँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ प्रेसिडेन्ट इराकी सँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप ः
लियो क्लब के हो ? संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस न ।
मुलत ः लियो क्लब सवैलाई सेवा गर्ने उदेश्यले आज भन्दा ६० वर्ष अघि स्थापना भएको हो । लियो क्लवले निस्वार्थ भावनाले समाजमा सेवा गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नि स्वार्थ सेवा नै लियो क्लबको मन्त्र हो ।
लियो क्लब धनाढ्यहरुको संस्था भनिन्छ नि ?
सवैले यहि प्रश्न गर्नुहुन्छ । तर वास्तवमा लियो क्लब धनाढ्य वा धनि युवाहरुको मात्र संस्था होइन । लियो क्लबका केहि मामपदण्ड पुरा गरे जो कोही पनि यसको सदस्य बन्न सक्नु हुन्छ ।
तपाईँहरु सेवाको नाममा विभिन्न सेवामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आउनु भएको छ कार्यक्रम गर्दा लाग्ने खर्च चाँही कसरी जुटाउनु हुन्छ ?
कार्यक्रममा कति सहभागिको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
नेपालका २ सय भन्दा बढी लिये क्लबमा आवद्ध एउटा क्लबबाट कम्तिमा २० जनाको सहभागिता रहेने अपे्क्षा गरिएको छ । समग्रमा देशभरीबाट ५ सय भन्दा बढी लियो सदस्यहरुको सहभागिता हुनेछ ।
अल नेपाल लियो मिटमा के–के कार्यक्रम हुन्छन् ?
यसमा मोटिभेसन, सेमिनार, स्पिच प्रोग्राम, विभिन्न खेलहरु, टिम विल्डीङलगायतका कार्यक्रमहरु गरिने छ ।
कार्यक्रममा क–कसलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ ?
हाम्रो कार्यक्रममको उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ज्यूबाट हुनेछ । हामिले कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्री, पुर्व मन्त्री , राजनितिक दलका केही नेता ज्यूहरु, लायन्सका विभिन्न पदमा रहेका लायन ज्यूहरु लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुलाईसमेत आमन्त्रण गरेका छौँ ।
अल नेपाल लियो मिट गर्न कति खर्च लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ र त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?
अल नेपाल लियो मिटमा हामिले मोटामोटी ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म लाग्ने अनुमान गरेका छौँ । केहि खर्च हामि लियो क्लबकै सदस्यहरुबाट जुटाउँछौँ, केही लायन्स क्लबले सहयोग गर्नेछ र केही खर्च हामिले स्पोनसरसिपबाट पनि संकलन गर्नेछौँ ।
तयारी कस्तो गर्नुभएको छ ?
अल नेपाल लियो मिट २०१८ लाई सफल पार्न हामिले विभिन्न समिति उपसमिति गठन गरेर तिब्र तयारी पारेका छौँ । इभेन्टको आयोजनाका लागि हामिले रञ्जन शाहीलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेका छौँ । त्यस्तै कार्यक्रमको सफलताका लागि आवास, सुरक्षा तथा स्वयंसेवक, यातायात, खाना व्यवस्थापन, इभन्ट म्यानेजमेन्ट, सञ्चार, फोटोग्राफिलगायतका विभिन्न उपसमितिहरु गगठ गरेर काम अगाडी बढाएका छौँ ।